Misoomni suluulaa hojii si’a tokkoon dhaabatu miti Eegumsa qabeenya uumamaafi misooma sululaa callaa guddisuuf aggaamame
Misoomni suluulaa hojii si’a tokkoon dhaabatu miti Eegumsa qabeenya uumamaafi misooma sululaa callaa guddisuuf aggaamame Featured
Mootommoota Gamtoomaniitti Dameen Eegumsaafi Qabiinsa Naannawaa bara 1986tti qorannoo adeemsiseen Itoophiyaatti giddugaleessaan lafa hektaara tokkorraa biyyeen toonii 130 kan dhiqamu ta’uu mul’iseera.
Dhiqama biyyee kana ittisuuf mootummaan waggaa waggaatti ji’a Amajjii jalqabaarraa kaasee guyyoota 30f hojiilee eegumsaafi kunuunsa qabeenya uumamaa, akkasumas misooma sululaa bal’inaan hojjechaa tureera; ammas hojjechuurratti argama.
Kunis baroota darban keessatti dhiqama biyyee ittisuun omishaafi omishtummaan haalaan akka dabalu taasisuusaa ragaaleen Ministeera Qonnaafi Qabeenya Uumamaa ni ibsu.
Ministir de'eetaan ministeerichaa, Doktar Kaabaa Urgeessaa Kibxata darbe hojii eegumsa qabeenya uumamaafi misooma sululaa kan bara 2010 naannoo Amaaraatti eegalamerratti argamuun haasawa taasisaniin akka jedhanitti, galiin biyyattiin qabdu harki caalaan misooma qonnaarraa kan argamu waan ta’eef mootummaan damee kanarratti xiyyeeffachuun hojjetaa jira.
Qabeenya uumamaa haalaan kunuunsuu dhiisuurraan kan ka’e biyyoon dhiqamuun gara biyyoota ollaatti geejjibamaa turuun omishaafi omishtummaan akka hir’atu gochuutiin lammiilee hiyyummaaf saaxilaa turaniiru jechuun dubbatu.
Haa ta’u malee, waggoota kurnan lamaan darbanirraa kaasee mootummaan keessumaa misooma suluulaarratti xiyyeeffatee hojii qabeenya uumamaa eeguufi kunuunsuurratti hojjetaa waan tureef jijjiiramni qabatamaan mul’achuu danda’uu addeessaniiru.
Bara kanas mootummaan akkaataa adda ta’een dhugoomsuuf kallattiin kaa’eeraa jedhanii, akka biyyaatti hojiileen eegumsaafi kunuunsa qabeenya uumamaa lafa hektaara miliyoona sadiifi walakkaan kan hojjetamu ta’uus himaniiru.
Kana keessaa ammoo %52 hojii misooma suluulaa ta’uusaas himanii, qonnaan bultootni biyyattii lafa qonnaasaaniirraa biyyeen akka hindhiqamneef hojiilee qabeenya uumamaa eeguufi kunuunsuu aadaa godhatanii hojjechuu akka qaban yaadachiisaniiru.
Yunivarsiitii Baahir Daaritti ogeessi eegumsaafi qabiinsa qabeenya uumamaa, Doktar Ayyanawu Gabrasillaasee ibsa miidiyaalee adda addaatiif Kibxata darbe kennaniin akka jedhanitti, biyyoota addunyaafis ta’e Afrikaa keessumaa kanneen jiruufi jireenyi lammiileesaanii qonnarratti xiyyeeffateef qabeenya uumamaa (bishaaniifi biyyee) kunuunsuun hiika guddaa qaba.
Kunis, hojiin eegumsa qabeenya bishaaniifi biyyee si’a hojjetamu dhiqamni biyyee ni hir’ata, omishaafi omistummaanis akka dabalu kan taasisuudha jechuun ibsu. Waggoota darban keessattis mootummaan hojii kanarratti xiyyeeffatee hojjechaa waan tureef jijjiiramootni callaa qonnaan bultootaarratti mul’achuu danda’aniiru jedhu.
Haa ta’u malee, qonnaan bultoota muraasa biratti hojicha ilaalchisee hanqinni hubannoo mul’achaa waan tureef, keessumaa misoomni suluulaa haala karoorfameen deemaa hinturree jedhaniiru.
Kunimmoo qonnaan bultootni muraasa biratti misooma suluulaa hojjechuun akka waan laftisaanii mootummaatiin fudhatameetti hubachaa waan jiraniif, daagaawwan hojjetamaniifi biqiltootni dhaabaman diigamaa, akkasumas bubuqqifamaa turaniiru.
Kanaaf, mootummaan qonnaan bultoota kanneeniif dhimma eegumsaafi kunuunsa qabeenya uumamaarratti hubannoo gahaa kennuu akka qabu gorsaniiru. Kana waliinis akkuma biyyattiitti iddoowwan misoomni suluulaa itti hojjetaman hedduu waan ta’aniif adda baasuun beekuufi hubannoo uumuun akka barbaachisus yaadachiisaniiru.
Akka Oromiyaattis bifuma walfakkaatuun duula misooma qabeenya uumamaa kunuunsuu marsaa 8fan eegalameera.
Torban kana/This_Week 43568
Guyyaa mara/All_Days 1468348